Fikradaha dib-u-warshadaynta: fikradaha ugu fiican ee wax ku cusboonaysiinta guriga | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 04/05/2022 12:00 | Dib u warshadaynta
Dib u warshadaynta walxaha maalinlaha ah, marka lagu daro kaydinta lacagta iyo siinta taabashada asalka ah iyo shakhsi ahaaneed ee guryaheena, waxaan yarayn karnaa qashinka waxaanan ixtiraami karnaa deegaanka. Wax badan baa jira fikradaha dib u warshadaynta guriga iyo in ay awoodaan in ay helaan nolol labaad wixii aan hadda u adeegin sidii loogu talagalay in ay noqdaan khasaare.
Maqaalkan waxaan ku siin doonaa qaar ka mid ah fikradaha ugu fiican ee dib u warshadaynta guriga.
1 Muhiimada dib u warshadaynta guriga
2 Fikradaha dib-u-warshadaynta
2.1 Dhalada caaga ah sida dheriga ubaxa
2.2 Weel loogu talagalay baasto iyo khudaar
2.3 weel dhalada leh
2.4 Koob yogurt galaas oo shumaca haye ahaan
2.5 Dib u warshadaynta buufinta xumaaday
2.6 Gacanka dhalada caaga ah
2.7 Ilays qaaddo caag ah leh
2.8 Abaabulaha leh tubooyinka kartoonada
2.9 sawir sawir leh dhalo
2.10 Xoolaha koofiyadda soodhaha leh
2.11 shelf buugaagta
2.12 Shumac qurxin leh joogsi
2.13 Hanger leh qalab duug ah
2.14 Laambad guluub duug ah leh
2.15 Sanduuqyo dahab ah oo leh dhalooyin caag ah
Muhiimada dib u warshadaynta guriga
Caadada dib u warshadaynta ayaa noqotay mid aad muhiim u ah sanadihii ugu dambeeyay. Tani waxay cadaysay inay tahay habka ugu wanaagsan ee lagu dhimi karo xadiga qashinka wasakhaysan deegaanka. Inkasta oo adeegsigu uu hawshan ka dhigay mid adag, haddana dad badan ayaa go'aansada in ay dib u isticmaalaan qaybo ka mid ah guryahooda. Iyadoo qaar badan ay u muuqan karaan kuwo aan faa'iido lahayn, Waxaa jira xeelado iyo fikrado aad isticmaali karto si aad isaga ilaaliso inaad iska tuurto.
Faa'iidooyinka dib-u-warshadaynta hal-abuurka ahi waxay asal ahaan la mid yihiin kuwa dib u warshadaynta dhaqameed: daryeelka deegaanka, yaraynta wasakhowga, yaraynta gaaska aqalka dhirta lagu koriyo, ilaalinta khayraadka dabiiciga ah iyo, tan ugu muhiimsan, horumarinta caadooyinka isticmaalka mas'uul ka ah.
Si kastaba ha ahaatee, noocan ah dib-u-warshadaynta waxay ina siinaysaa qiimo dheeri ah: waxay naga caawisaa kobcinta hal-abuurka waxayna naga dhigaysaa inay aad ugu dhowdahay inaan raadino xalalka maalinlaha ah agabka, walxaha iyo alaabta aan gacanta ku hayno.
Kaliya maahan kala soocida iyo dib u isticmaalida, Faa'iidada ugu weyn ee dib-u-warshadaynta hal-abuurka ahi waa ogaanshaha sida loo qaato wixii aan hore u haysanno oo aan siino wareegga labaad ama xitaa saddexaad ee nolosha, sidaas darteed fududaynta hababka isticmaalka mas'uuliyadda.
Habka ugu fiican ee aad kula qaadan karto wakhtiyo aan la ilaawi karin qoyskaaga oo aad nolosha ku siisid alaabada aanad isticmaalin waa dib u warshadaynta hal abuur leh. Marka laga soo tago fikradaha aan ku siino qoraalkan, waxaad sidoo kale hubin kartaa hagahayaga DIY halkaasoo aad ka heli karto tusaalooyin ku saabsan sida loo sameeyo farshaxanno cajiib ah.
Dhalada caaga ah sida dheriga ubaxa
Haddii aad ka fekereyso inaad abuurto beerta magaalada, waxaad ka fogaan kartaa inaad iibsato dheryaha oo aad ka qayb qaadato isticmaalka mas'uuliyadda leh adiga oo isticmaalaya dhalooyin caag ah oo madhan. Goynta waxaad gooyn kartaa kala badh, ka samee gooyn yar xagga hoose si aad biyaha uga daadiso, oo ka buuxi carro si aad u awooddo inaad ku beerato sidaad jeceshahay. Sidoo kale, beerta magaaladu waa hab fiican oo aad ku kori karto cuntadaada oo aad bilowdo waxqabad kaa caawin doona ma aha oo kaliya deegaanka, laakiin sidoo kale maskaxda iyo jidhka.
Weel loogu talagalay baasto iyo khudaar
Fikradani waxay kuu ogolaanaysaa inaad kaydiso meel bannaan oo aad alaabtan ku sii hayso muddo dheer. sida? Isticmaal dhalooyin caag ah, sida cabitaannada fudud, oo baro bariis, digir ama baasto si ay diyaar ugu noqdaan. Rinjiga biyaha ku salaysan, waxaad ku qurxin kartaa dibadda si ay u helaan shaqo hal abuur leh oo aad ku aqoonsato calaamado joogto ah si aad u ogaato waxa ay ku jiraan.
weel dhalada leh
Tani waa habka caadiga ah ee dib u warshadaynta hal-abuurka ee dhalooyinka dhalooyinka. Waxaad ku rinjiye kartaa faashash qurux badan oo waxaad ku qurxin kartaa gurigaaga qaab asal ah.
Koob yogurt galaas oo shumaca haye ahaan
Mid ka mid ah shaqada muraayadahaas ayaa noqon kara in loo isticmaalo sidii xuddun u ah. Kaliya waa inaad dhaqdaa oo aad saartaa shumac si iftiinka qolka oo dhan uga muuqdo.
Dib u warshadaynta buufinta xumaaday
Kubadaha la tuuray ayaa inta badan la dhigaa koornayaasha sababtoo ah hadda kama shaqeeyaan ujeeddadii loogu talagalay. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo ay ugu wacan tahay agabka lagu sameeyay. Waxa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo bacaha ciyaaraha madadaalada.
Gacanka dhalada caaga ah
Waxaan ku siin fikrad si aadan u tuurin biyo caagadaha ama cabitaannada fudud. U goo goo goo oo ku dheji xariijimo dhar ah si aad u sameysid jijin qurux badan.
Ilays qaaddo caag ah leh
Malqacadaha la tuuri karo ee ka haray ciidaha ayaa dib loo isticmaali karaa sidii laambad-haystayaal, si fudud u gooya qaybta hoose, Isticmaal xabag khafiif ah oo si habaysan ugu dheji durbaan ama dhalada biyaha.
Abaabulaha leh tubooyinka kartoonada
Tubooyinka xaashida musqusha ee kartoonada ah iyo alaabada kale ee la midka ah ayaa loo isticmaali karaa samaynta qabanqaabiyeyaasha fiilooyinka. Waxa kale oo loo isticmaali karaa in lagu abaabulo qurxiyo, qalin-qoritaan iyo wax ka badan. Ku rid dhowr sanduuq oo kartoon mid walbana u isticmaal sidii kala-soocida walxaha la sheegay. Way fududahay in la sameeyo.
sawir sawir leh dhalo
Waxay ka kooban tahay gelinta sawirada dhalooyinka dhalooyinka. Kadibna, waa inaad ka buuxisaa saliid badan.
Xoolaha koofiyadda soodhaha leh
Sababtoo ah qaabkooda, koofiyadaha soodhaha ayaa ku habboon farshaxanimada carruurta. Tusaale ahaan, adoo ku dhejinaya kartoonada, waxaad samayn kartaa xayawaan yaryar oo qurux badan si aad u qurxiso. Doorasho kale oo weyn ayaa ah in lagu dhejiyo albaabka ama qaboojiyaha leh magnets. Waxaad heli doontaa madadaalo fudud oo madadaalo leh.
Dadka buuga jecel waxay inta badan urursadaan buugaag laga yaabo inaanay dib u isticmaalin. Halkii aan iska tuuri lahayn, waan dib u warshadeyn karnaa oo ka dhigi karnaa shelfan quruxda badan. In sidan, waxaan abuurnaa saameyn muuqaal ah oo cajiib ah. Tixgalin suugaanta asalka ah oo qof kasta oo na soo booqata ka tagi doonta hadal la'aan.
Shumac qurxin leh joogsi
Koofiyadaha noocyada cabitaanada qaarkood ayaa loo rogi karaa shumacyo qurxin yar oo qolka fadhiga ama qolka jiifka. Intaa waxaa dheer, waxay yihiin kuwo aad u fudud in la sameeyo. Ka buuxi dhux, Mareexaan yar saar oo ha nastaan. Si kastaba ha ahaatee, had iyo jeer ka digtoonow inayna guban karin hareerahooda.
Hanger leh qalab duug ah
Qalabkan ayaa had iyo jeer naga caawin doona hawlaha qaar ee guriga. Si kastaba ha ahaatee, qaar ayaa aad u da' weyn oo aan ku beddelnay tignoolajiyada badan. Si aad uga fogaato lumintooda, laabi oo ku dheji dusha alwaax si aad u hesho qaar ka laadlaad ah. Sidan, waxaad ku gaari doontaa qurxinta faa'iido leh oo rustic ah.
Laambad guluub duug ah leh
Waad ku mahadsan tahay muraayadda quruxda badan, nalalka ayaa leh taabasho aad u qurux badan oo ku habboon qurxinta. Bilawga, haddii aad haysatid qaar duq ah, ka soo saar dusha sare, ka buuxi saliid ama biyo, oo ku dheji wick.
Sanduuqyo dahab ah oo leh dhalooyin caag ah
Qaabka ubaxa ee ugu hooseeya dhalooyinka caaga ah waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo sanduuqyo dahab ah oo badan oo qurux badan.
Waxaan rajeynayaa in fikradahan dib-u-warshadaynta aad ku biirin karto hadhuudhkaaga ciidda ilaalinta iyo daryeelka deegaanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Dib u warshadaynta » Fikradaha dib-u-warshadaynta
Sababaha saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo